नयाँ दिल्लीमा नेपाली नाटक “मृत्युमा पढ्नेहरु”
रियान इन्टरनेशनल स्कुल नयाँ दिल्लीको आयोजनामा भारतको नयाँ दिल्लीमा १०० भन्दा बढि स्कुलहरुको संलग्नतामा “विश्व हाम्रो खेल मैदान हो” भन्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नयाँ दिल्लीको मण्डि हाउस नजिकै एल.टि.जि. अडिटोरियममा केही दिन पहिले सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, लगायत २८ भन्दा धेरै देशहरुको सहभागिता रहेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट “आइटा नेपाल”का अध्यक्ष राजन उप्रेतीव्दारा निर्देशित नाटक “मृत्युमा पढ्नेहरु” मञ्चन गरिएको थियो । उक्त नाटकमा “चेल्सी ड्रामा क्लब”का विद्यार्थीहरुले अभिनय गरेका थिए। भारत नेपाल अनलाइनका अनुसार “प्रदर्शनको क्रममा नेपाली नाटक ‘मृत्युमा पढ्नेहरु’ नाटकको प्रस्तुति देखि अन्त्य सम्म तालीको गडगडाहटले अडिटोरियम गुन्जायमान भएको थियो” ! भारतीयभुमिमा विश्व समुदायको विचमा नेपालको प्रस्तुतिलाई तालीको गडगडाहटले सम्मानित गरिँदा सहभागी कलाकारहरु हर्षविभोर भएकाथिए ।
सन् १९९५ देखि निर्देशकको रुपमा रङ्गमञ्चमा उपस्थिति जनाएका राजन उप्रेतीले झिन्तांग, समवेदना, लेखन, शहिद नं. २०६ र मृत्युमा पढ्नेहरु आदि नाटकहरु निर्देशन गरेकाछन् । निर्देशक उप्रेतीले सन् २००२ मा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड, सन् २००५ मा उत्कृष्ट कलाकारको अवार्ड तथा सन् २००६ मा उत्कृष्ट प्लेराईटको अवार्ड पाएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सुप्रिमा भेले, एलिज पराजुली, सबिना खडका, बिजय सापकोटा, अंकित खडका, निर्मल अर्याल, अस्मिता देवकोटा, श्रुती पराजुली, पल्पसा श्रेष्ठ, सुब्रत सिटौला, घनश्याम न्यौपाने लगायतका कलाकारको सहभागिता रहेकोथियो ।